Misoro yeNhau, Chitatu Ndira 06, 2021
Bazi rezvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakashaya nechirwere cheCovid-19 vamwe churu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 1, 365 vakatapurirwa chirwere ichi.
Mutemo weNational Lockdown Level Four unopinda muzuva repiri nhasi vakafanobata chigaro chameya weHarare vachikurudzira vanhu vose kuti varemekedze mutemo uyu senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Amai Yevedzo Chitiga Sibanda, vanonyora bhuku rinodzidzisa vana mitauro miviri mikuru yeZimbabwe, Chishona neIsindebele, senzira yekubatsira mhuri dziri kunze kwenyika kuti vana vasarasa mitauro yavo.
Dare ramejasitiriti nhasi ratongera ma DJ matatu kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubata kwaravaita vaine mhosva yekuunganidza vanhu vachiridza mimhanzi vakamirira goredzva muHarare.
Georgia inosarudzo maseneti maviri kuti apinde mudare reSenate yemu America.